Ogaden News Agency (ONA) – Safiirka London: kooxda Cabdi ilay wafdiga ay soo raaceen ayaa sabab u ah guuldarada
Safiirka London: kooxda Cabdi ilay wafdiga ay soo raaceen ayaa sabab u ah guuldarada
Barqiyad dagdag ah oo safiirka u fadhiya Ingriiska uu u diray Wasaaradda AD ee Itobiya oo si hoos ahaan ah ay u heleen qawmiyadda Amxaarada ayuu safiirka kaga eed sheegtay sabata ay xukuumadda dhexe u soo raaciyeen Cabdi ilay iyo kooxda Somalida ah ee la socotay wafdiga. Taasoo uu ku tilmaamay inay sabab u ahayd fashilaadii shirka iyo banaabaxyadii Intifaadada ahaa ee safaaradda lagu qabsaday.
Safiirka wuxuu warqadiisa ku sheegay inay arintaasi keentay in jaaliyadda S.Ogadenya oo aad u abaabulan ay ku daydaan qawmiyadihii kalee Itobiya. Wuxuu safiirka sheegay in sababta shirka loo qabanayo ee ahayd in shacabka Itobiya laga gado mashaariicda horumarineed aanay wax shaqa ah ku lahayn qawmiyadda Somalida sidaa darteed sabab loo soo raaciyo Cabdi ilay oo uu ku tilmaamay in aanu sumcad fiican ku dhex lahayn jaaliyadda xooga badan ee dagan dalka Ingriiska.
Sidoo kale, inkastoo aan la helin wararkii ay direen safaaradda iyo qunsuliyadaha Itobiya u jooga dalka Mareykanka, waxaa hubaal ah inay qudhooda siyaba la mid ah warbixinta safiirka Ingriiska ay gudbiyeen.
Xuuraanse aan la yeelanay ila-wareedyo si hoos ahaaneed ula shaqeeya wakaaladda ONA oo ku sugan Adisababa waxay noo sheegeen inuu jiro dareen xoogan oo muujinaya in maamulka KT Meles ay isku khilaafsan yihiin Cabdi ilay iyo nidaamkiisa. Waxaa jira koox saraakiil iyo wasiiro iyo xoghaynta Meles ka tirsan oo iyagu ku xidhan Cabdi ilay oo boqolaal kun oo laaluush ah laga siiyo badjet-ka loo qoondeeyo gobolka. In maamulada kililada ay iska laaluushaan kooxda awooda ku dhex leh maamulka Meles waa badbaadada kali ahee ay haystaan qawmiyadaha waxan maamul ku-sheegyada lagu tilmaamo ay Wayaanaha TPLF u dhoo-dhoobeen.
Dhanka Jigjiga ayaa laga soo warinayaa inuu iska horimaad xoogan ka dhex sodo kuwii dugsanayay maamul ku sheega ee islahaa riwaayadda uu Cabdi ilay soo alifay ayaa hirgali doonta. Qaar badan ayaa hadda ku waabariistay in ujeedada Wayaanaha ay tahay un inuu marwalba abuuro shiqaaqo iyo iska horkeen dadka shacabka ah si marwalba loogu baahdo isaga inuu kala saaro taasoo aan dhamaad lahayn. Filimka hadda ka shidan Jigjiga ayaa waxay ku sheegeen dadkii aan kala xidhiidhnay degmooyinka lagu dhawaaqay oo si xirfad leh loo agaasimay inuu abuuro buuqa hadda taagan.
Qodabkan iyo arima kale oo la xidhiidha maleesiyadii cabdi ilay oo lakala dirayo ayaan warbixin dheeraad ah ka sugaynaa.